एमाले सांसद पाण्डेले दिए राजीनामा ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठबिशेष खबरएमाले सांसद पाण्डेले दिए राजीनामा !
एमाले सांसद पाण्डेले दिए राजीनामा !
विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४० सांसद नै रहेको अवस्थामा संघीय सत्ताको जोडबलमा आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने अभियानमा रहेका पोखरेललाई अन्ततः एमालेका अर्का सांसदले पनि राजीनामा दिएर धक्का दिएका छन् । एमाले सांसद दूग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन् ।
शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पाण्डेले सभामुखसामु राजीनामा बुझाएका हुन् ।उनी कपिलबस्तु २ क बाट विजयी भएका थिए । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डेले हालको राजनीतिक परिस्थिति नियाल्दै आजकै मितिबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
टिपरमै बो’क्न थालियो कोरोना संक्रमितका श’व
लुकादालुकाउदै यसरी बाहिरिएको थियो रश्मिको बिहेको खबर !
एक सातामा झन्डै ३ सय कोरोना सङ्क्रमितको श’व पशुपतिमा अ’न्त्ये’ष्टि
यात्रुसँग बढी भाडा लिने एक जना गोंगबु नयाँबसपार्कबाट पक्राउ